Fikambanana World Steel: manombatombana ny fitomboan'ny vy manerantany hitombo 5,8% amin'ny 2021 - China Foshan Hermes Steel
Fikambanana World Steel: maminavina ny fangatahana vy manerantany hitombo 5,8% amin'ny 2021
Mpanjifa Jingwei China-Singapore, 15 aprily. Araka ny tranonkala ofisialin'ny World Steel Association, ny World Steel Association dia namoaka ny kinova farany fohy an'ny tatitra fohy momba ny fangatahana vy (2021-2022) tamin'ny faha-15. Mampiseho ny tatitra fa hihena ny fangatahana vy manerantany amin'ny taona 2020 Aorian'ny 0.2%, hitombo 5,8% amin'ny 2021, hahatratra 1,874 miliara taonina. Amin'ny 2022, hitombo 2,7% hatrany ny fangatahana vy manerantany, mahatratra 1,925 miliara taonina.
Mino ilay tatitra fa ny onja faharoa na fahatelo misy ny valanaretina dia hihahombo amin'ny telovolana faharoa amin'ity taona ity. Miaraka amin'ny fivoaran'ny vaksiny maharitra, ny hetsika ara-toekarena any amin'ny firenena lehibe mandany vy dia hiverina amin'ny laoniny.
Al Remeithi, Filohan'ny Komitin'ny Fikarohana momba ny tsenan'ny World Steel Association, dia naneho hevitra momba ny valin'io vinavina io: "Na dia nitondra voka-dratsy teo amin'ny fiainam-bahoaka aza ny valan'aretina pnemonia satroboninahitra vaovao, dia mbola tsara vintana ny indostrian'ny vy manerantany. Tamin'ny faran'ny taona 2020 dia nifanaraka kely fotsiny ny fangatahana vy manerantany. Ny ankamaroany dia noho ny fanarenana mahery vaika nataon'i Chine, izay nahatonga ny fitakiana vy any China hitombo hatramin'ny 9,1%, raha any amin'ny firenen-kafa kosa eran'izao tontolo izao, ny fangatahana vy dia nihena 10,0%. Ao anatin'ny taona vitsivitsy, toekarena mandroso Ny fitakiana vy amin'ny toekarena an-dalam-pandrosoana dia ho tafarina hatrany. Ny antony manohana dia ny fanakanana ny fangatahana vy sy ny drafitra fanarenana ara-toekarena an'ny governemanta. Na izany aza, ho an'ny toekarena mandroso sasany dia tsy maintsy miverina amin'ny ambaratonga alohan'ny valanaretina izany. Haharitra taona maro izany.
Raha niresaka momba ny indostrian'ny fananganana eo amin'ny sehatry ny vy dia nilaza ny tatitra fa noho ny valanaretina, dia hiseho ny fironana fampandrosoana samihafa amin'ny sehatry ny indostrian'ny fananganana. Miaraka amin'ny fiakaran'ny telecommuting sy e-commerce, ary koa ny fihenan'ny dia ataon'ny orinasa, dia hitohy hihena ny fangatahan'ny olona trano sy trano fivarotana. Mandritra izany fotoana izany dia nitombo ny fangatahan'ny olona hanana fotodrafitrasa lojika amin'ny varotra e-varotra ary hanjary sehatra iray mihamitombo izany fangatahana izany. Nitombo ny maha-zava-dehibe ny tetikasan'ny fotodrafitrasa ary indraindray izy ireo no hany nahatonga ny firenena maro hamerina ny toekareny. Amin'ny toekarena misimisy, ny tetikasan'ny fotodrafitrasa dia hitohy hamorona singa matanjaka. Amin'ny toekarena mandroso, tetikasa drafitra fanarenana maintso sy tetikasa fanavaozana fotodrafitrasa no hitarika ny filan'ny indostrian'ny fananganana. Tombanana fa amin'ny 2022, ny indostrian'ny fanorenana manerantany dia hiverina amin'ny haavon'ny 2019.
Nilaza ihany koa ny tatitra fa amin'ny sehatra manerantany, amin'ny indostrian'ny vy, ny indostrian'ny fiara dia nahitana fihenam-bidy lehibe indrindra, ary antenaina hiaina fanarenana matanjaka ny indostrian'ny fiara amin'ny 2021. Ny indostrian'ny fiara manerantany dia antenaina hiverina ny haavon'ny 2019 amin'ny 2022. Na dia ny indostrian'ny milina manerantany aza dia tratry ny fihenan'ny fampiasam-bola amin'ny 2020, ny fihenam-bidy dia ambany lavitra noho ny tamin'ny 2009. Ny indostrian'ny milina dia antenaina ho sitrana haingana. Ho fanampin'izay, misy lafin-javatra lehibe iray hafa koa izay hisy fiantraikany amin'ny indostrian'ny milina, izany hoe ny fanafainganana ny fanaovana nomerika sy ny automatisation. Ny fampiasam-bola amin'ity faritra ity dia hampiroborobo ny indostrian'ny milina. Ankoatr'izay, ny tetikasa maitso sy ny drafitra fampiasam-bola amin'ny sehatry ny angovo azo havaozina dia ho lasa faritra fitomboana hafa koa ho an'ny indostrian'ny milina. (Loharano: Sino-Singapore Jingwei)